Yakachipa tsika jira simbi laser yekucheka zvikamu fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Iyo jira simbi maitiro inosanganisira laser kucheka, iyo inonyanya kushandisa yakakwira-inoshanda lasers kunyorera nekucheka zvinhu. Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa.
Yakasarudzika jira simbi laser yekucheka zvikamu-chaiyo jira simbi laser yekucheka kugadzirisa michini zvikamu
Kugadziriswa kwave kushandiswa zvakanyanya mumagetsi emagetsi, kutaurirana, indasitiri yemotokari, zvekurapa zvekushandisa uye mimwe minda. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira zvigadzirwa zvekurapa, pamwe nemotokari nemotokari (marori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Pashure: Sheet simbi zvikamu laser kucheka
Zvadaro: Yakakwira mhando OEM jira simbi laser yakatemwa zvikamu